Waalidka Wax Filayo	Waxyaabaha uu u baahanyahay cunugga kuu dhashay hoos ayay ku taxan yihiin haddey yihiin kuwo laga maarmaan ah, kuwo wax caawinaya, iyo kuwo fiican laakinse laga maarmi karo. Waalidka waaya aragga ah waxaa laga yaaba ineysan nagu raacin sidaan wax u qoorsheynay, laakiin liiskaan taxan wuxuu ku siinayaa fursad aad u yeelatid meel aad wax ka bilowdidi oo goo'aansatid.
Waxyaabaha lagama maarmaanka ah
Teleefoon nambarka daryeelaha caafimaadka cunuggaaga. Hubso inaad nambarkaan meel ku qoratay. Waaxaad u baahantahay meel aad wax raadsato markey su'aalo iyo dhibaato dhacdo intaan la gaarin cafimaad baarista ugu horreysa ee cunuga cafimaadsan.
Kursiga babuurka. Cugnugaaga baabuur aan kursi lahayn kuma qaadi kartid. Isbataallada badanaaba waalidka cusub waxey u siyaan kursi. Haddaadan kursi lahayn weydiiso inaad adeegan heli kartid.
Caano bolbare. Haddaad cunugaaga naas siisid, markaad caano bolbare guriga dhigatid waxey marmarsiyo u noqayaan inaad isticmaashid haddey dhibaato yar ka imaato naaska aad siisid.
Xafaayad (midda dhar ah midda balastikada). Ubadka qaarkood xasaasiyo ayey ka qaadan saabuunta ku harta xafaayadda dharka ah, kuwa kalena waxey xasaasiyo ka qaadaan xafaayadda blastikada. Labadoodaba guriga ku hayso.
Loox biyaha celinayo xafaayadda uga beddel.
Maro qoyan ama kuwo fashado qoyan isticmaal markaad xafaayadda ka beddeleysid. Dadka qaarkiis waxey qabaan in fashadda dukamada lagu gado iney xasaasiyo u keento jirka cunuga.
Meel uu cunuga seexdo
Kheyraad kugu caawinayo xanaanada cunuga. Cunugaaga cusub waqti badan oo waalidka uusan u baran ayuu kaa rabaa. Ninkaaga, xubno qoyska ah, ama saxiib wanaagsan wuxuu usubuucyada ugu horreeya ee dhalashada cunuga ku noqon karaa cawiino weyn. Marka hore Caawino Codso, 211, waa layn kugu xariirinayo meel aad ka heysho haddi loo baahdo caawinaad, xanaano iyo kheyradka.
Waxyaabaha ku Caawiya
Sariir (Looxa waa inuusan ka badnaan 6cm ama 2 iyo 3/8 u dhaxeyso)
Nuujiye. Culumada aqoonta u leh caanaha naasaha waxey dadka kula taliyaan ineysan cunuga barin nuujiyaha saddexda usbuuc ee ugu horreya haddii cunuga naas la siinayo.
Meel yar oo cunuga yar lagu hayo (iskudhaca ka yaraado ¼ inji ama 6mm kala jiraan)
Buugaag. Da' hore ku bilow inaad cunugaaga buug u akhrisid.
Boombolo. Ubadka meel dhow keliya ayey wax ka arki karaan. Haddaad rabtid wax indhohooda ay la raacaan, u soo gad waxyaabo ballaran oo midabyo aad uu muuqda leh. Dhallanka cusubi waxey sii fiican u arkaan mibadyada madow iyo caddaan oo is daba taxan.
Miiska wax lagu beddelo
Kishaad cunuga lagu qaado
Exer Sauce ama Johnny Jump Up.
Waarkii oo Kooban
Dhalidda cunuga cusub waa khibrad fiican, welwelna kugu abuuri karta. Isu diyaarin gabaan, meel aad khayraadka caafimaadka oo ka jwaabaha su'aalahaaga, garab aad qoyskaaga iyo saxibada ka heshid waxey kaa yareynayaan welwelka kuguna caawinayaan sidaad ugu riyaaqi lahayd waqtigaan cajaibka leh ee noloshaada. Section Navigation